Netflix ဟာစက်တင်ဘာလထဲမှာ 41 အသစ်သောရုပ်ရှင်နှင့်မူရင်းပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ် - ပြီးပြည့်စုံသောစာရင်း - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » Entertainment "Netflix ဟာစက်တင်ဘာလထဲမှာ 41 အသစ်သောရုပ်ရှင်နှင့်မူရင်းပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ် - ပြီးပြည့်စုံသောစာရင်း - BGR
Netflix ဟာမနေ့ကသူ့ရဲ့အသစ်ထွက်စက်တင်ဘာလ 2019 ၏ပြီးပြည့်စုံသောအစီအစဉ်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းနှင့်လည်းလစဉ်ကာလအတွင်းဖယ်ရှားမည်ဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိအချိန်တွင်ယင်း၏ catalog ထဲမှာအကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ လာနှင့်စက်တင်ဘာလများတွင် Netflix နဲ့အပေါ်တတ်သမျှသောအမှုအပြည့်အဝအချိန်ဇယားအဘို့, ဆက်ဆက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လွှမ်းခြုံ ။ ဟုတ်ပါတယ်, များစွာသောလူအပေါငျးတို့သရုပ်ရှင်ကိုလျစ်လျူရှုနှင့်တတိယစတူဒီယိုပြလတိုင်းထုတ်လွှင့်ခံရဖို့ Netflix နှင့်ရုပ်ရှင်နှင့်အထူးထံမှအသစ်သောမူရင်းစီးရီးတစ်ခုလုံးစာရင်းကိုကြည့်ဖို့ပိုနှစ်သက်။ သငျသညျဤအမြိုးအစားထဲသို့ကျနေလျှင်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ဤအရပ်၌ကြောင့်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။
သြဂုတ်လအတွက်တစ်လစဉ်အတွင်းတင်ပြမျှ 56 ရုပ်ရှင်ထက်လျော့နည်း, မူရင်း programming နဲ့အထူးသဖြင့်, Netflix ဟာမူရင်းများအတွက်တော်တော်လေးကြီးမားလဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ့သို့သောအတော်များများစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာသစ် MINDHUNTER2ရာသီပြီးသားဒီလပွဲထွက်ခဲ့ပြီး, ဒါပေမယ့်သြဂုတ်လအများဆုံးမျှော်လင့်မျှော်လင့်ထားကြသည်သစ်ကိုမူလတန်းအချို့ဖြစ်ပါတယ် - အပါအဝင် 13 အကြောင်းရင်းအဘယ်ကြောင့် ရာသီနှင့်၏ပထမဦးဆုံးရာသီ3The Dark Crystal: အသက်အရွယ်ခုခံ - လာကြ၏။ အဆိုပါကိစ္စရပ်များကိုထုတ်ဝေနှငျ့သငျသြဂုတ်လအတွင်းကလွဲချော်စေခြင်းငှါပထမဦးဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်သည့်အခါကိုသိလိုပါသလား? လွှတ်ပေးသြဂုတ်လ 2019 ၏ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်ဇယား ici .
စက်တင်ဘာလ 2019 အတွက် Netflix ၏မူလဗားရှင်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ဖို့တစ်ခုခုရှိတယ်။ နယူးအထူးဘီလ် Burr, Jeff Dunham နှင့်မို Gilligan လတစ်လျှောက်လုံးဖြန့်ဝေခြင်း, အသစ်သောရာသီဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါစားဖိုမှူးပြရန် et Jon Favreau ပထမဦးဆုံးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဟောပြောချက်ပြပွဲ Zach Galifianakis အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးကရုပ်ရှင် နှစ်ဦးဖမ်အကြား စက်တင်ဘာလထဲမှာပွဲဦးထွက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်, နှင့်တက်ကြွန့်အသတ်ထုတ်ဝေ အဆိုပါသူလျှို ကောင်းစွာ Netflix အပေါ်တစ်ဦးသိသိသာသာအခန်းကဏ္ဍနောက်လထဲမှာ Sacha Baron Cohen ကိုသရုပ်ဆောင်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အဆိုပါငါ-မြေ ကျနော်တို့ကျိန်းသေသည်၎င်း၏ရွားလှနာမကိုအမှီရှိနေသော်လည်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ တကယ်တော့ဒါဟာအနည်းငယ်ဖွင့် ကျွန်တော်တို့ကို flashbacks ပေး ပျောက်ဆုံး .
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစက်တင်ဘာလ 2019 အတွက် Netflix ၏မူလဗားရှင်း၏ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်ဇယား, ကြှနျုပျတို့လက်ရှိရရှိနိုင်သမျှသော Netflix စာမျက်နှာများမှလင့်များပါဝင်သည်ပါပြီ။
အဆိုပါ6စက်တင်ဘာလ Streaming
အဆိုပါ 10 စက်တင်ဘာလ Streaming
အဆိုပါ 12 စက်တင်ဘာလ Streaming
အဆိုပါ 13 စက်တင်ဘာလ Streaming
အဆိုပါ 15 စက်တင်ဘာလ Streaming
Folsom အတွက်အကျဉ်းထောင်ဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Tigre del Norte - ] ORIGINAL Netflix
အဆိုပါ 17 စက်တင်ဘာလ Streaming
အဆိုပါ 20 စက်တင်ဘာလ Streaming
အဆိုပါ 23 စက်တင်ဘာလ Streaming
အဆိုပါ 24 စက်တင်ဘာလ Streaming
က Jeff Dunham: က Next ကို - Netflix ORIGINAL
အဆိုပါ 25 စက်တင်ဘာလ Streaming
အဆိုပါ 26 စက်တင်ဘာလ Streaming
အဆိုပါ 27 စက်တင်ဘာလ Streaming
အဆိုပါ 30 စက်တင်ဘာလ Streaming
Gilligan မို: အရှိန်အဟုန် - Netflix ORIGINAL
သမား 2] ORIGINAL Netflix
kit Harington ဒီတော့သူကဟစျကျွောလေ၏ကြောင်း Thrones ၏ဂိမ်းထဲမှာနှောင်းပိုင်း Jon နှင်းသမိုင်းကိုခစျြ - BGR